Umkhiqizi we-Finnish u-Paroc ubelokhu ekhiqiza uboya obunamaminerali ngesisekelo se-basalt iminyaka engaphezu kwengu-50. Lokhu kusetshenziselwa ukusetshenziselwa kabanzi kusetshenziselwa ukugxila okushisayo kwezinto ngezinhloso ezahlukene. Njengoba izinto ezibonakalayo eziyinhloko ziyi-fiber yamatshe. Ngenxa yesisekelo esifanayo, umkhiqizo uhlangabezana nezidingo zomlilo ezilahlayo.
Ngokuvamile, maduzane, abathengi bakhetha imikhiqizo yeParoc, umshini wokulondoloza lo mkhiqizo unezici ezinhle kakhulu zobuchwepheshe. Ngokusho kubasebenzisi, ungafaka ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi akhethekile namakhono. Ipuleti ithola isimo esidingekayo, futhi usayizi wayo ungashintshwa ngommese ovamile. Imizamo ayidingekile, kodwa uthuli alukwakhiwa.
Abathengi bathi ngemuva kokushisa ukushisa komlilo kulesi sakhiwo uhlala endaweni ephakeme. Lokhu kungenxa yokuthi iphuzu lokuqhakazila lezintambo yizinkulungwane eziyi-1000. Le ndaba ayimelana nemidiya yemidiyamu esebenzayo, ama-solvents namafutha, futhi iphinde ikhuthaze izinga eliphakeme lokuxilonga. I-webs ayithintwa nezinguquko zokushisa, ngakho ukucindezela nokwandiswa kwabo akuvamile.
Uma ukhetha uphawu lweParoc (okuyi-insulant, ikakhulukazi), kufanele ufunde kabanzi mayelana nemibono yabantu abathengile le ndaba futhi banesikhathi sokuyihlola ngesikhathi sokusebenza. Ngakho-ke, izakhiwo ze-hydrophobic zinikeza ukungenwa okungadingekile kokuswakama kwamanzi. Uma ukuhlanzwa kwenzeka, ngemuva kokumisa, ubhiya obomvu buzobuyisela izici zayo zokushisa ezishisayo. Amakhosi asekhaya aphawula ukuthi isakhiwo sinikeza ukubambelela okunamandla kakhulu phezu kwezakhi zesakhiwo kwezakhiwo. Phakathi kwezinye izinto, ungathembela ukuthi izinto ezikuyo yonke impilo yesevisi zizogcina ifomu layo langempela.
Ngokuthenga i-Paroc heater, impendulo okuvame ukuba yinto enhle kuphela, uthola ithuba lokudala i-microclimate elungile kumuntu ngaphakathi kwesakhiwo, ngaleyo ndlela kunciphisa kakhulu ukulahlekelwa ukushisa. Ukuphila kwemisebenzi yezakhiwo kuyanda, njengoba kunjalo namandla abo. Ubukhulu obuncane bezinto ezibonakalayo kubangelwa ukungafani kwezingcingo, phakathi kwamanye umoya. Lesi sakhiwo sinikeza ukuqhutshwa okuphansi kwe-thermal, okwenza kube nokuthungwa kwamafutha okushisa.
Izazi ziqaphele ukuthi ukumelana okushisayo kohlobo lwekotini lwe-basalt uhlobo lungalinganiswa nezinkuni. Kulesi simo, ukuqina kwezinto ezizosebenza kuzolingana namamitha ayi-100 no-400, ngokulandelana. Kulesi simo, izitini ezinezitini ezifanayo ziyoba nobukhulu bama-1800 millimeters; Ngokuqondene nokhonkolo, lesi sibalo senyuke sibe ngu-4700 millimeters.
Ukukhetha i-Paroc ye-heater, izici okufanele uzibheke kusengaphambili. Phakathi kokuyinhloko, ukushisa komshini kumele kuvezwe, okuhlukahluka, kuye ngokuthi isimo. Ngaphansi kwezimo zomswakama, lesi sibonakaliso sikhuphuka, ngenxa yokuthi amanzi akhulisa indawo yokuxhumana phakathi kwezingubo. Ngenxa yalesi sizathu, uma ukhetha ukususwa okushisayo, kubalulekile ukucabangela ukungena kwamanzi.
Izimpawu zokuhambisana nokucima umlilo nokuhambisana nemvelo
Njengoba izinto ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwemikhiqizo echazwe yi-rock basalt. Ngokwengxenye enkulu, indaba iqukethe izintambo zamatshe nenani elithile lezithasiselo ezihlukahlukene. Lokhu kubonisa ukuthi amapuleti awasekeli ukushisa okusebenzayo. Ngemuva kokuthi izinga lokushisa lifinyelele kumkhawulo ongaphezu kwamadijithi angu-1000, i-canvas ingathola umonakalo omkhulu. I-Paroc iyinhlangano ye-heater ehlangabezana nezidingo eziqinile zokuphepha komlilo, yingakho ingasetshenziselwa indima yokuqapha umlilo nokuvikelwa komlilo ngaphandle kokuvinjelwa ekwakhiweni ngezinhloso ezahlukene. Lapho ukhetha imikhiqizo yomkhiqizo kaParoc, kufanele ucabange ukukhishwa kwalokhu umkhiqizi ngokuningiliziwe. Uma ujwayele izici, uzoqonda ukuthi le ndaba ayinayo umthelela omubi empilweni yomuntu. Ebhekene nokuzinza kwezinto eziphilayo, ama-pathogenic microorganisms awakwazi ukubunjwa phezulu nangaphakathi kwesakhiwo. Azikho izinto ezinobungozi ezifana ne-asbestos eboyeni bamatshe , lokhu kwenza kube lula ukuhlukanisa ukwaziswa njengeqembu lezinhlayiya eziphephile ngokuphuma.
Izinto ezichazwe zingabonisa ukusebenza kahle kakhulu esimweni esomile. Kodwa ngezinye izikhathi akunakwenzeka ukuqinisekisa nokuqinisekisa izimo ezifanele zokusetshenziswa. Yingakho udinga ukwazi ukuthi le ndaba iziphatha kanjani uma idalulwe kumswakama. Izindwangu zamatshe zinezici zemvelo ezinamanzi. Phakathi nokwakhiwa kwezithasiselo ze-ukotini u-wanezela, ukuthuthukisa i-hydrophobicity. Lokhu kuvumela ukwandisa ububanzi bokusetshenziswa, ukunikeza ithuba lokufakwa ezindaweni ezihlukahlukene zezulu. Uma ugcwalisa indaba emanzini amahora angu-2, umthamo wamanzi kulesi sihloko uzoba ngu-1% noma ngaphansi. Uma kunjalo, isikhathi sokudlula senyuke sibe yizinsuku ezimbili, umthamo wamanzi ungalingana namaphesenti amathathu. I-Vata inezici eziphezulu zokuphambana nomoya, ngakho-ke cishe ihlala isomile. Ngesikhathi sokusebenza kwesakhiwo, umfutho wamanzi uyokwakha, ozophuma ngokukhululekile ngesakhiwo salo.
I-Heater ye-Paroc, enezibalo ezingu-33 kilograms ngayinye ngamamitha ayi-cubic, ayixhomeki ekucindezelekeni kwemishini. Le ndaba ayikwazi ukudala imvelo enhle ekuthuthukiseni izinqubo zokubola. Ubuso bezinto eziphathekayo bungathintwa yizinto eziphilayo, kanye nama-solvents nama-alkali, angakwazi ukulimaza isakhiwo noma izakhiwo. Ngenxa yokuthi ukugxilwa kwemvelo kunemvelo engathathi hlangothi, kusetshenziswe ngempumelelo ukugxilonga emsebenzini emkhakheni wamapayipi, izakhiwo zezingqimba kanye namaqhinga okuphuza umoya.
Izici zeParoc Extra
I-Paroc ukugxila okwengeziwe, izici zazo ezizokuvumela ukuba uqonde ukuthi kufanelekile ukuzithenga, zenziwe ngesisekelo sikashukela noma i-basalt. Ungayisebenzisa uma ushisa uphahla olugxotshiwe, izindonga, ukuguqulwa kwama-interfloor kanye nezingxenye. Ubukhulu bamapulethi ahluka kusuka ku-1200x600x50 kuya ku-1200x600x200 mm. Esikhathini sokuqala, intengo yokupakisha izoba yi-ruble angu-800, kuyilapho ku-ruble engama-900. Ngomitha wamakhomikhali umthengi kuzodingeka akhokhe ama-ruble angu-1580 ngobukhulu bamapuleti okukhulunywe ngawo ekuqaleni.
Ubuningi bamacwecwe ngamakhilogremu angu-35 ngamamitha ayi-cubic, kanti ukuqhuba okushisayo kungu-0.036 W / m * ° C. Ukulinganisa kwamapuleti kuklanyelwe ukucabangela ubukhulu obujwayelekile bezakhiwo zefreyimu zezingqimba kanye nophahla. Lokhu kwenza kube lula ukuyifaka, futhi kuphelisa isidingo sokufakwa okungeziwe. Amacwecwe abekwe ngokuqinile ngangokunokwenzeka ngesikhathi sokufakwa, okwenza kube lula ukuqinisekisa ukuxhumana okusheshayo, ngaphandle kwemibandela yokuvuza okushisa nokwakhiwa kwamabhuloho abandayo. Phakathi kwezinzuzo kufanele kube izinga eliphezulu lokuqina, okubonakala ngokungabikho komthwalo oqhubekayo.
I-Paroc ukushukela okungaphezulu kunomthamo ozinzile kuwo wonke ubukhulu, futhi ngemva kokufakwa lokho okuqukethwe akusihlehlisi, isakhiwo sigcinwa ngendlela yaso yasekuqaleni, engabandakanyi ukuwohloka kwezimfanelo zokushisa ezishisayo ngesikhathi. Amapulangwe ayenziwa ngendlela yokuthi ayenqenqemeni elonwe ngokucacile, okwakuboniswa ngabasebenzisi abaningi, ikhwalithi ebalulekile yokuqinisekisa ukulingana okuqinile kwamapulethi esihlokweni. Uma uthenga i-Paroc Extra heater, kufanele ufunde izibuyekezo ngakho kusengaphambili. Mhlawumbe bayokuvumela ukuba uqonde ukuthi yikuphi ukwaziswa okumele ukhethe. Abathengi banjengokuthi ukuhlanganiswa kwalokhu kuqukethe izithasiselo ze-hydrophobizing, ezisakazeka ngokulinganayo kulo lonke ubukhulu. Lokhu kunikeza hygroscopicity. Uma ubuchwepheshe bokufaka kanye nemibandela yokusebenza kuphawulwa, impilo yesevisi yezinto ezibonakalayo ingafinyelela eminyakeni engu-50.
Ukuvakashela isitolo, uzokwazi ukuthola izinhlobo eziningana zokugxila eParoc. Phakathi kwabo kufanele kuphawulwe i-Linio-15, ebonakala ngokunyuka kwabantu. Lesi sibonakaliso singashintsha kusuka ku-96 kuya ku-120 kilogram ngamamitha ayi-cubic. Uma futhi wanquma ukukhetha imikhiqizo ye-Paroc, i-heater, ikakhulukazi, kufanele wazi ukuthi ku-assortment ungathola futhi ezehlukene ze-FAS 3-30, esetshenziselwa ukuhlelwa kobuciko. Lezi zinto ziwuboya obunzima ngamatshe ngesimo samapuleti ngabanye.